अब कसले बनाउँछ कांग्रेस ? spacekhabar
Monday, March 25, 2019 | सोमबार, चैत ११, २०७५
अब कसले बनाउँछ कांग्रेस ?
डा. रामवरण यादव काठमाडौँ, २८ मंसिर
बीपी कोइरालाले समाजवादको बाटो हुँदै जुन लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, त्यो अहिलेसम्म निकै सान्दर्भिक छ । त्यस विषयमा हामी ५० वर्षपछि पनि छलफल गरिरहेका छौं । जबसम्म समाजवाद रहन्छ तबसम्म कांग्रेसको सफलता रहन्छ ।
मैले राष्ट्रपति भएपछि नेपाली कांग्रेस छाडिसकेको छुु। तर कांग्रेसको प्रशिक्षणबाट राजनीतिमा आउने अबसर पाएँ, त्यो मेरा लागि एकदमै सुखको कुरा हो । तर अहिले म कांग्रेस होइन । म राष्ट्रको व्यक्ति हुँ । मलाई अहिले राष्ट्रको चिन्ता छ । म बीपी कोइराला, गणेशमान र कृष्णप्रसाद होइन । मलाई राष्ट्रको चिन्ता असाध्यै लाग्छ । तपाईहरु भन्नुहुन्छ होला ‘रिटायर्ड’ भए पछि काम पाउनु हुन्न, किन चिन्ता लिएर बस्नु भएको होला ?
म व्यवहारिक विषयमा जान चाहन्छु । अहिले कांग्रेसका सभामा युवाहरुको आकर्षण घट्दो छ । कांग्रेसको सभामा ५० बर्षमाथिका मानिसको उपस्थिति बढी छ । पार्टीले अहिले पनि काठमाडौं केन्द्रित मानसिकता बोकेको छ । कांग्रेसको महासमिति बैठक पनि किन जनकपुर, बारा पर्सामा हुन सक्दैन । त्यसैले म भन्छुु कांग्रेस अहिले जनताबाट टाढा हुँदै गएको छ ।
बीपी कोइराला १० दिन जनकपुरमा गएर बस्न सक्ने, कृष्णप्रसाद १० दिन कलैया गएर बस्न सक्ने, गणेशमानजी गएर पर्सामा १० दिन बस्न सक्ने । त्यहाँ गएपछि बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादले त्यहाँका जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर आउन सक्ने गिरिजाप्रसाद पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुगेर अभियान नै सञ्चालन गर्न सक्ने, अहिलेको नेतृत्वले त्यो काम किन गर्न नसक्ने । अहिले कांग्रेसमा कुन नेता छन्, जो कार्यकर्ताको घरमा गएर बस्छन् । अहिलेका कांग्रेसी नेताहरु पेनगुइन चरोजसरी होटेलमा बस्छन् । अहिले नेताहरु जिल्ला गएपछि शहरमा बस्छन् र त्यहीबाट उडेर आउँछन् । उनीहरु जनताको नजिक पर्नै चाहन्न् । चिन्ताको विषय कांग्रेसका लागि यो हो ।
म यहाँ खासगरी ३ वटा कुरा यहाँ गर्न चाहन्छु । पहिलो कुरा बहुलबादका आधारमा यो संविधान बनाइएको छ । यो एकदमै राम्रो हो । कांग्रेसको सबै सिद्धान्तअनुसार यो संविधान आएको छ । तर यो संविधान धेरै हडबड र गडबडमा आएको छ । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान आएन, दोस्रो संविधान सभाबाट आयो । संविधान जारी गर्दा म चाहन्थें, एउटा राम्रो संविधान आओस् । यो संविधानमा धेरै अग्रगामी कुरा छन् । यसैलाई मात्र हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्यौं र लागू गर्न सक्यौं भने देश सफलतातिर जान्छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेस जिम्मेवार बन्नुपर्छ । संविधान जारी गर्दा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो र कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले यो संविधान लागू गराउन कांग्रेस जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रका सबै समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । अब हामीले कुनै पनि मनमुटाव राख्नु हुँदैन । मधेसको समस्या, जातीय तथा क्षेत्रीय जुनसुकै समस्या पनि संविधानको भावनाअनुसार खोज्नु पर्छ ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेस पनि मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि कांग्रेसले आफ्नै कार्यकर्तालाई दुस्मन देख्छ । नेताहरुले एक अर्कालाई दुस्मन देख्छन् । कांग्रेसमा गुटबन्दी र भ्रष्टाचार छ । यसलाई कसरी उन्मुलन गर्ने विषयमा नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । कांग्रेसको एकतालाई मजबुत बनाएर लग्नुस् मेरो शुभकामना छ ।
दोस्रो कुरा जुन हामीले धर्मनिरपेक्ष संविधान ल्यायौं । तर कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरुबाट धर्म निरपेक्षताका विषयमा प्रश्न उठाउने काम भएको छ । यो एकदमै गलत कुरा हो । यतिबेला धर्म निरपेक्षताको विषयमा फेरि कुरा गर्दा यसले अरु समस्या निम्त्याउन सक्छ । यही संविधानमा हामीले सबै धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने कुराहरु पनि उल्लेख गरेका छौं । यो संविधानमा धर्मान्तरको कुरा छैन । धर्मान्तर गराउनु अपराध हो । मेरो सुझाब छ, धर्मान्तर गराउने विरुद्धको कानुन संसदबाट जारी गराएर लागू गराउनुस ।
म जहाँ जान्छु के सुन्छु भने काठमाडौंमा ५ हजार चर्च खुलिसके । धर्मान्तरले गर्दा द्वन्द्वको विउ रहन्छ र यसले देश र समाजलाई बर्वाद पार्छ । राष्ट्रको एकता सबैभन्दा जरुरी छ ।
तेस्रो कुरा बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, ‘राष्ट्र रहे त्यहाँ प्रजातन्त्रको विरुवा रोप्छु । प्रजातन्त्र रहे त्यहाँ समाजवाद रहन्छ र सामाजिक न्याय पनि लागू गर्दै जान सकिन्छ । हामी कल्याणकारी राज्य बनाउछौं ।’
म त्यस्तो ठाउँको मानिस हुँ, मेरो ठाउँको ‘ढेला चेपा’ पनि कांग्रेस कांग्रेस बोल्छ । ‘ढेला चेपा’ अहिलेको नेतृत्वले बुझ्दैन । किनभने कांग्रेस अब शहर केन्द्रित भएको छ । गाउँको शव्द बुझ्नै छाडेको छ । अहिले पनि ५० प्रतिशत मानिस तराईका गाउँ–गाउँमा बस्छन् । अहिले मधेसका नेता पहाड जादैनन् । पहाडका नेता पनि मधेस झर्दैनन् । मधेसका कति जना नेता पहाड र पहाडका कति जना नेता मधेस पुगेको छ त्यो कांग्रेसले भन्न सक्छ? माफ गर्नुहोला कांग्रेसको एउटा प्रदीप गिरिबाहेक रामचन्द्र जी पनि रामशरण जी पनि रुट लेवलमा तराईमा काम गर्नुभएको छैन । मजस्तो तराईको मानिस हिमाल, पहाड र तराई घुमेको एक जना पनि अहिले नेपाली कांग्रेसमा छैन । त्यसैले म भन्छु अब कसले बनाउँछ कांग्रेस ।
(पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले बिहीबार राजधानीमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पुस्तक विमोचन समारोहमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २८, २०७५, ०१:३८:००
डा. रामवरण यादव @spacekhabar undefined
प्रधानमन्त्रीज्यू! यो पाराले रेल र पानी जहाज चलाउन सकिन्न
सीकेसँग किन डराएका हुन् दुई तिहाईका ओली ?
आदर्शका धरोहर महेन्द्रनारायण निधि
प्रमुख प्रतिपक्षकाे दुर्लभ सहयोग
असफल सरकारका निराशाजनक उपलब्धी
जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने निर्देशन छापामार शैलीमा किन आयो?
निर्मला हत्या प्रकरण : तत्कालीन डिएसपी जीसी पनि अदालत उपस्थित
जनकपुर बमकाण्डको अन्तिम सुनुवाइ दोस्रो दिन पनि जारी
मौसम बदलीसँगै हल्का वर्षाको सम्भावना
प्रकाशमान सिंहले भने– विप्लबसमूहलाई वार्तामा ल्याउने औकात अहिलेको सरकारसँग छैन
किन हुन्छन् बग्गीखानामा मोटरसाइकलको थुप्रो ?
विप्लबसमूहविरुद्ध सरकारी पञ्जा अझ कसिलो हुँदैं, कोशी ब्यूरो संयोजक पनि पक्राउ परे
नेपाल–जापान श्रम समझदारी
विप्लव माओवादीबाट विश्वकर्मा एक्लि‌ए
राजधानीका २८ मध्ये अधिकांश सांसद सदनमा बोल्दैनन्